PressReader - Ilanga: 2017-10-02 - Kuthakathwe amathuna asebukhosini
EZOMPHAKATHI: Bebeyocela izibusiso
Ilanga - 2017-10-02 - Izindaba - PHUMLANI GAMA
SISHUBILE isimo ebukhosini bakwaGumede KwaMashabane, eManaba, KwaMhlabuyalingana, enyakatho-mpumalanga yeKwaZulu-Natal, emuva kokutholakala kwezinto ezingaqondakali zibhiliwe emathuneni asendlunkulu ngoLwesine ekuseni.
INkosi Sizabantu Gumede (92), izwakalise ukukhathazeka maqede yasola amalunga athile omndeni wayo asemkhankasweni wokuyiketula esihlalweni ukuze kubekwe inkosana yayo, uMnu Sipho Sunboy Gumede (42) esihlalweni.
Ngemuva kokuba kubonakale le mikhuba, inkosi iwuhlabe yawulawula esizweni nasezinduneni zayo. ILANGA lizibonele le mikhuba obekukhona kuyona namathambo okungaqondakali ukuthi ngawasiphi isilwane. Abeyingxenye yomlotha otholakale kuleli ziko elikhulukazi ebelibaswe kugilwa le mikhuba.
Lesi sigameko sethuse abaningi ngisho nenduna yakhona eManaba, uMnu Mshiywa Gumede. Amathuna asebukhosini abiyelwe ngocingo ngendlela yokuthi kakulula ngisho ukuthi kungangena ingcanga. Phakathi kwamakhosi alesi sizwe atshalwe kule ndawo kubalwa uMthonga noZikhungo ozala iNkosi Sizabantu.
Inkosi ithi kayikungabazi ukuthi abagile lo mkhuba yizitha zayo ngoba befuna ukuyendisela koyisemkhulu.
“Selokhu ngazalwa, kangikaze ngizwe kuthiwa kuyoshiswa kugilwe imikhuba ngalolu hlobo emathuneni esizwe sakwethu. Akekho onelungelo lokuza kule ndawo ngaphandle kwami njengoba sengisele ngedwa kubaba, yimina onelungelo lokuthetha idlozi ngayo yonke indlela.
“Lokhu ngikubona kuwubuthakathi uqobo lwabo, kakukwazi ukuthi noma kwenziwa izinto kuze kubhekiswe uthi olubhilwe ngemithi enyakatho, okuyilapho kufanele ukuba ngibhekiswe khona uma ngidlula emhlabeni.
“Ngisola laba abafuna ukungikhipha esikhundleni sami bafake indodana yami ngoba nakhu besebenzisa ukuxaxeka kwayo kwezomnotho, bayithembisa ukuthi isizodla izinkulungwane ihlukane nokuhamba ichitha ithengise imithi ezitaladini. Mabangajahi, mabangilinde sekuseduze phambili,” kusho inkosi ebikhihla eseNkosazana yaseLangeni, uNandi, ithi kuyiphatha kabi ukuphehlelwa amanzi amnyama.
“Ngiyafisa ukuhlala nomfana wami ngimbonise ngalokhu ngoba into yokuqala okufanele ayiqaphele kulaba bantu agijima nabo kumanje, wukuthi bazothi besuka bayigudluze esikhundleni bethi kufuneka isizwe siholwe ngumuntu ofundile njengoba bake basikaza ukukwenza kimina lokho.
“Kumanje indodana yami ihlangana nabantu abafuna ukungigudluza esihlalweni bangiphehlela namanzi amnyama,” kusho inkosi.
Ithe iyasola ukuthi uMnu Njuluza Gumede - ongowasebukhosini - unesandla kule nto. ILANGA lixhumanile noMnu Gumede othe ubekhona futhi kunguyena obehola ithimba labantu abebeye kule ndawo ngenhloso yokuyocelela indodana yenkosi (uSipho) izibusiso ezidalweni zesizwe.
“Ufuna ukwenzani ngalokho? Cha besiyile laphaya, yimina obehola ithimba lasendlunkulu elisezinhlelweni zokubeka indodana ukuba ithathe izintambo zokuhola isizwe. Besiyobika ingane kwabangasekho, nami nginelungelo lokuthetha amadlozi endlunkulu yesizwe sakwaGumede.
“Ngeke ngikufihle ukuthi thina kasisezwani nenkosi endala ngoba kayithembekile. Yiyona eyazisayinela ukuthi isifuna ukuthatha umhlalaphansi ngoba isikhathele. Okunye okwenze singayitsheli ngebesiyokwenza wukuthi isifakele izincwadi zesivimbezelo sokuba singalinge sisondele eduze kwayo,” kusho uMnu Gumede. ILANGA lizame kaningi ukuxhumana nendodana yenkosi kodwa kwangalunga ngenxa yokuthi ucingo lwayo belungangeni. Belunxusa ukuba kushiywe imiyalezo nayo egcine ingayiphendulanga. ILANGA lithole ukuthi lolu daba lubikiwe emaphoyiseni kodwa kalikho icala elivuliwe esiteshini samaphoyisa aseManguzi.
INKOSI Sizabantu Gumede (ekwesobunxele) ibikhuluma noMnu Khehla Gumede ofake izibuko none yamadodana ayo emathuneni asendlunkulu.
YILE mali etholakale emathuneni okusolwa ukuthi kugilwe angayo imikhuba njengoba bekukhona neziko.